Cat & òké bụ a 5 ukwu, 9 payline mkpụrụ igwe egwuregwu dị na mFortune Casino. The egwuregwu na-agụnye fun na akara dị ka a na agba ntụ òké, a aja aja cat, a cat na òké ego akpa akara, a mousetrap na ụfọdụ cheese, nakwa dị ka nnukwu uru ebre kaadị. E nwekwara anọ na-agbata n'ọsọ ụzọ ụkwụ nke mekutara ndi cat achụ òké na nke-ekwe ka ị-emeri mmezi ego. Na mgbakwunye, egwuregwu na-agụnye ọhịa akara, ikposa ihe nnọchianya, multipliers, free spins na a jackpot.
play Cat & Òké Ihe Anyị Na-atụ aro Casino
Olee otú na-egwu egwuregwu
dị ka Cat & Oke bụ a mfri igwe egwuregwu, ọ bụ a dị mfe egwuregwu ịmụta otú e si akpọ. Ị nwere ike igwu maka fun na-obi na-adị maka egwuregwu ma ọ bụ na-egwu maka ezigbo ego na-amalite na-emeri n'oge na-adịghị. Iji malite egwuregwu ị pụrụ ịkụ nzọ nke nwere ike ịbụ ka ala dị ka 10p.
Oke bụ anụ ihe nnọchianya nke ndị nọ n'ọnọdụ ọ bụla ọzọ na akara, ma e wezụga ikposa akara ma ọ bụ ndị bonus egwuregwu na akara iji wuchaa a na-emeri Nchikota.
The cat bụ ikposa akara. Ọ bụrụ na ị akpa ogho atọ ma ọ bụ karịa ikposa akara na otu akara ị ga-ọdịda free spins.
The cat na òké ego akpa bụ jackpot na akara ma ọ bụrụ na ị akpa ogho ise nke ndị a na-arụsi ọrụ payline, ị ga-ọdịda dum jackpot.
Ọ bụrụ na ị akpa ogho abụọ ma ọ bụ karịa òké oghere na-arụsi ọrụ payline, ị ga-abanye na bonus game. Ị ga-akpọga ya ebre osisi na a òké na a cat. Ị ga-mkpa tụgharịa dais ná mgbalị ịnọgide na òké n'ihu nke cat. Ị ga-emeri dị ka n'ámá ị adaa na, na ogologo nke oge ị jikwaa na-òké n'ihu nke cat. I nwere ike imeri nnukwu payouts na egwuregwu a.